Ahoana ny fitazonana ny milina fanodinana gantry? - Dongguan Tuoyuan Precision Machines Co. LTD.
Ahoana ny fitazonana ny milina fanodinana gantry?
Ny fiarovana ara-dalàna ny milina fitotoana gantry dia tena manandanja ihany koa. Olana mahazatra marobe no vokatry ny fanaovana tsinontsinona ny fiarovana ara-dalàna. Raha ny fampiasana ny milina fikosoham-bolo dia ampiasaina mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny asa siantifika sy ny lalàna mifehy ny fiarovana, dia afaka manakana ny maro Ao amin'ny fisalasalana, mampihena ny fatiantoka ara-toekarena.
Ny fanodinana milina fanodinana Gantry dia karazana fitaovana fanodinana mitarika avo lenta miaraka amin'ny automatisation, ny rafitra mikorontana ary ny vidiny lafo. Izy io dia mitana andraikitra tsy manam-petra amin'ny famokarana indostrialy maoderina. Mba hanomezana fahafaham-po ny fahombiazan'ny fikirakirana ny milina fikosoham-baozy, dia tokony hatao ny fiarovana sy ny fikojakojana ny fitaovan'ny milina. Zava-dehibe tokoa ny fampihenana ny tahan'ny lesoka amin'ny fanodinana milina fanodinana gantry CNC
Ny firafitra ankapobeny amin'ny fikirakirana ny milina fikosoham-bolo dia misy fefy lava. Ny rafitry ny gantry dia misy tsanganana roa, tsanganana, tsanganana mampifandray, tohana ambony, fonony ambony ary ondrilahy fikosoham-bolo mba hamoronana rafitra henjana. Mivezivezy sy midina manaraka ny lalamben'ny torolàlana ny vatan-kazo, ary misy andry mitsangana miorina amin'ny vatan-kazo. Herinaratra mahery fiasa am-pahefana mahery lohan-doha ary manoto loha. Ny solo-doha mankaleo sy manosotra dia mihetsika manaraka ny lalamby mpitari-dalana ary mihetsika ambony sy ambany Ny firafitry ny gantry dia mihetsika lava manaraka ny fandriana.
Rehefa miasa milina fitotoana gantry dia tokony hahatakatra ny fenitry ny fitaovan'ny milina ny mpandraharaha. Toy ny herin'ny milina mpamily ampela, ny halehiben'ny hafainganam-pandehan'ny fody, ny tahan'ny fahanana, ny elanelam-bokin'ny fitaovan'ny milina, ny fahafaha-mitondra ny latabatra, ny haben'ny fitaovana farany ambony ary ny kalitaon'ny fitaovana faran'izay avo indrindra avelan'ny ATC. Ilaina ihany koa ny mahatakatra ny toerana misy ny fenitry ny solika sy ny marika hoe menaka malama inona no ampiasaina.
Ho fanampin'izany, tazomy hadio ny tontolo iainana manodidina ny milina, ary tokony esorin'ny milina fanodinana vovoka matetika ny vovoka mba hisorohana ny lalan-drivotra mangatsiatsiaka tsy ho madiodio, ka mahatonga ny hafanana ao amin'ny kabinetran'ny CNC ho avo loatra ary tsy afaka miasa ny rafitra ara-dalàna. Ny vata fizaran-tany sy ny singa elektrika ao amin'ny kabinetra elektrika dia tokony hosorana vovoka tsy tapaka koa mba hiantohana ny fiasan'ny rafitra elektrika.
Ny firoboroboan'ny famokarana gantry CNC amin'ny ho avy